ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »5A Great ပထမဦးစွာအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အထင်ကြီးစေရန်အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
လူပထမဦးဆုံးကရိုက်ချက်အကြောင်းပြောဆိုသည့်အခါ, သူတို့ချက်ချင်းမျက်နှာ-To-မျက်နှာအဆက်အသွယ်ထင်. သို့သော်, ဆပြောင်းလဲကြပြီ, နှင့်အွန်လိုင်းအဆက်အသွယ်တို့နှင့်လည်းကိစ္စသိသိသာသာပထမဆုံးတွေ့ကြုံ ... အထူးသဖြင့်ကအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့မှကြွလာသောအခါ. နှင့်, မျက်နှာ-To-မျက်နှာပထမဦးဆုံးကရိုက်ချက်တွေအတွက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုပထမဦးဆုံးကရိုက်ချက်ချိန်းတွေ့အွန်လိုင်းထံမှကွဲပြားခြားနား.
အဘယ်မှာရှိသင့်ပထမဦးစွာအထင်ကြီး count: သင့်ရဲ့ Profile ကိုသင့်ရဲ့အီးမေးလ်
သင်ချိန်းတွေ့၏ရိုးရာနည်းလမ်းများကျော်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဘို့ဘေးဖယ်ဆိုရင်, သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးကရိုက်ချက်အရေးမကြီးပါဘူးသွားကြသည်ရှိရာအရပ်၌သင်တို့နားလည်သဘောပေါက်ရပါမည်ပထမဦးဆုံးအရာဖြစ်သည်. နှင့်, သင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးတွေ့ကြုံမှုဟာသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းနဲ့အီးမေးလ်နှစ်ခုလုံးတွင်တွေ့စေခြင်းငှါသွားကြ၏.
သောအခါသင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile ကြွလာ:
အကယ်လို့သင်ဟာမသိလျှင်, သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်ကိုအပြုသဘောနှင့်အကောင်းမြင်ဖြစ်သင့်သည် - သင်အထီးကျန်ဆန်သို့မဟုတ်စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြင့်ပြသကြောင်းဘာမျှမ (မိန်းမတို့အဘို့အဓိကအလှည့်-off မှာ). သင်သည်အစကလက်ရှိအဲ့ဒီအချိန်မှာသေချာချင်တယ်, သင်ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်မကြာခဏမွမ်းမံ (သို့မဟုတ်အမှုအရာသင့်အသက်တာပြောင်းလဲသောအခါ). သင်ညာဘက်လင်းနို့ဖြတ်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုအလွန်ပေးခြင်းမရှိဘဲပြုလိုအမှုအရာမျိုးနှင့် ပတ်သက်. ဖော်ပြရန်ဖြစ်ကြောင်းသေချာပါစေ. သတိရ, သင်သည်နောက်ကျောနှင့်ထွက်အီးမေးလ်ပို့သည့်အခါသင်သည်သူတို့အကျိုးစီးပွားကိုင်ထားချင်တယ်.
ယခု, သင်ကအလားအလာ "ရက်စွဲ" emailing အပေါ်စီစဉ်ထားမယ်ဆိုရင်, သင်တစ်ဦးလူသတ်သမားပထမဦးဆုံးအထင်အမြင်အီးမေးလ်ကိုရေးသားဖို့ကိုဘယ်လိုသိရန်လိုအပ်. သင်ပို့ဒါကပထမဆုံးအီးမေးလ်နွေးထွေးသောနှင့်ဖိတျချေါရှိရမည်; သင်စိတ်ဝင်စားတယ်သောလက်ခံရရှိမဲ့သူကပြသတဲ့အနေနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာ, သူတို့သင်သိမှရသင့်. ဒါကြောင့်, ပထမဆုံးရိုက်ချက်အီးမေးလ်အဘယ်အရာကိုတွက်ချက်သင့်တယ်?
1 - သင်တို့၏အီးမေးလ် Greeting
သင်ကြိုက်နှင့်ဆုံးဖြတ်တစ်စုံတစ်ဦး၏ပရိုဖိုင်ကိုရှာတွေ့သည့်အခါသင်သည်သူတို့အီးမေးလ်ပို့ချင်တယ်, သငျသညျကွီးစှာသောပထမဦးဆုံးအထင်အမြင်အောင်ပြောအရာကိုသိရန်လိုအပ်. သင့်အနေဖြင့်အောက်ပါနှင့်အတူအီးမေးလ်ပယ်စတင်သင့်တယ်, "ကောင်းမွန်သောတစ်ရက်သို့မဟုတ်ညနေပိုင်းသို့မဟုတ်မင်္ဂလာပါ (အသုံးပြုသူအမည်)". လူတစ်ဦးရဲ့အသုံးပြုသူအမည်မှန်မှန်ကန်ကန်စာလုံးပေါင်းကြောင်းသေချာပါစေ - သင်ဖို့ရှိပါကကချရေးဖို့. အဖွင့်ဒီလိုအဖြစ်နွေးထွေးဖိတ်ဖြတ်ပြီးလာ.
2 - A Brief ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး
အခါပြီးပြည့်စုံသောပထမဦးဆုံးရိုက်ချက်အီးမေးလ်ရေးသားခြင်းငှါကြွလာ, ဒီမှာစိတ်တွင်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်တစ်ဦးအစွန်အဖျားင်: သုံးအပိုဒ်နှင့်ဘာမျှမထက်လျော့နည်းစာပိုဒ်နှစ်ခုထက် ပို. ဘာမျှမ. တိုတောင်းသောသို့မဟုတ်ယေဘုယျဘာမှမသင်ပြန်ကြားချက်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, နှင့်ရှည်လွန်းဘာမှမသင်မဆင်မခြင်အဖြစ်ဖြတ်ပြီးလာရန်ကြိုးစားနေပါတယ်ဆိုလိုတယ်.
3 - Common Ground ရှာမည်
သင်သည်သူတို့၏ပရိုဖိုင်ကိုကျော်ကြည့်သောအခါ, သင်တို့သည်ဤမျှအီးမေးလ်ထဲမှာဖော်ပြထားခြင်းဘုံ၌တစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့မှာသေချာပါတယ်. ဒါကြောင့်ဘုံ၌သင်တို့နှစ်ဦးစလုံးဝေစုကထူးဆန်းတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်, အဲဒီအကြောင်းသူတို့ကိုပြောပြ. သူတို့သည်သင့်ဆီကအီးမေးလ်တစောင်ကိုရပြီးတဲ့နောက်အများဆုံးလူတွေကိုသင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုထုတ်စစ်ဆေးပေးလိမ့်မယ်နေစဉ် (နှင့်ဟုတ်တယ်, သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်ကိုသင့်ရဲ့ Like နှိပ်ဝါသနာဖော်ပြထားခြင်းသင့်ပါသည်), သင်အမြဲဒီအပေါ်ကိုရေတွက်မထားသင့်.
4 - ဖော်ပြခြင်း Profile ကို-specific မှာ Detail
ယခုအားဖြင့်သင်တို့ကိုဂရုတစိုက်သူတို့ရဲ့ profile ကိုကျော်သွားပြီင်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အီးမေးလ်စာစရေးဖို့လာသောအခါ, အဲဒီအကြောင်းတိကျသောအရာတစ်ခုခုဖြင့်ဖော်ပြ. သူတို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်တစ်နေရာရာမှာဒါမှမဟုတ်သူတို့မြင်ခဲ့ရပြီးပါပြီတဲ့ရုပ်ရှင်အကြောင်းပြောနေတာကိုစဉ်းစားပါ, စသည်တို့ကို. နှင့်ခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. အပြုသဘောဖြစ်. သင်သည်ထိုသူတို့နောက်ကျော reply ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ကအပြုသဘောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်ဖြတ်ပြီးလာအရေးကြီးသောဒါဟာင်.
5 - တစ်ဦးကိုမေးပါ (ရုံတစ်ခုမှာ) ကိုတိုက်ရိုက်မေးခှနျး
သင်သည်နောက်ကျောတစ်ပြန်ကြားချက်ရဒါကြောင့်ပဲတဦးတည်းကိုတိုက်ရိုက်မေးခွန်းမေးရန်အကောင်းဆုံးဒါဟာင်. လွန်းမေးခွန်းတွေအများကြီးစပ်စုအဖြစ်ကိုရိပ်မိနိုင်ပါတယ်. မေးခွန်းကိုဖြေဆိုခြင်းသူတို့စိတ်ထဲမထားပါဘူးတစ်ခုခုဖြစ်တာသေချာပါစေ.
တစ်ဦးပထမဦးဆုံးရိုက်ချက်ဖန်တီးဖို့အတွက်သင့်ကိုကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့အရေးကြီးသောဒါဟာင်, သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile နှင့်အီးမေးလ်ကိုနှစ်ဦးစလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ကြည့်ဖို့လိုအပ်လာ - တစ်ဦးကောင်းသွားဖြီးနှင့်အတူထိုနှစ်ပါးကူ​​းသွား, စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံနှင့်သဒ္ဒါအမှားများကိုရှာဖွေနေ. ဤစာနှစ်စောင်၌ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိကြလော့, နှင့်သင်ကကနဦးအီးမေးလ်ရေးတဲ့အခါ, အထွေထွေအချက်အလက်တွေကိုကပ် - သင်၌နေသောသူ, သင့်အသက်, သင်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်လျှင်, ကလေးတွေရှိသည်, စသည်တို့ကို.
ပထမဦးဆုံးကရိုက်ချက်တော့ဘူးပဲမျက်နှာ-To-မျက်နှာအဆက်အသွယ်အတွက်မဟုတ်; ထိုသူတို့သည်စအွန်လိုင်းအသုံးပြုပါတယ်. အချို့သော forethought နှင့်အတူ, သင်ရှာဖွေနေသည့်ပြန်ကြားချက်ရရှိသွားတဲ့သောပထမဦးဆုံးရိုက်ချက်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်.